Iko Kunaka kweMagetsi Wiricheya
Kune avo vane muviri wepasi kuremara uye muviri wepamusoro usina kusimba, wemagetsi wiricheya ndiyo mhinduro kwayo kufamba. Izvo zviri nyore kwazvo kumushandisi uye mabhatiri avo kana magetsi anokwanisa kudzoreredzwa nekungozvibaya mumagetsi.
Electric mavhiripu zvakanakira kupa mushandisi kufamba uye kuvabatsira kuti vadzokerezve kumwe kudzora kwehupenyu hwavo.
Electric mavhiripu anofambiswa nemabhatiri anogona kuchajwazve. Izvi mavhiripu dzakakura, dzakasimba uye dzinorema kudarika dzenguva dzose mavhiripu nekuti ivo vanofanirwawo kutakura huremu hwakawedzerwa hwemota nemabhatiri. Electric mavhiripu dzakagadzirirwa kupa vakaremara nzira yekureruka kufamba.
Electric mavhiripu inogona Kukubatsira Kuti Ufambe
Kune vamwe vashandisi vane hurema husingavabvumidze kuti vashandise zvakajairika kutonga. Ivo vava vakakurumbira kwazvo nekuda kwekugona kwavo kudzosera simba vakakuvara, vakuru kana remara nekupa kufamba. Magetsi mavhiripu anowanikwa mumhando dzakawanda uye muhuwandu hwakawanda hwebhajeti.
Kunyangwe simba mavhiripu zviri nyore kushandisa, kuzvitakura zvinogona kunetsa dzimwe nguva. Ivo vanouya neaviri sarudzo dzekutyaira izvo zvinosiyana zvichienderana nekuiswa kweiyo yakakura seti yemavhiri.
Mhando dzeMagetsi mavhiripu
Zvifambiso zvemashure-kumashure ndizvo zvinomhanya kwazvo asi hazvina kugadzikana munzvimbo isina kuenzana. Iwo ekumberi-vhiri dhiraivha anononoka asi ane yakawanda kutonga nemamwe matsva magadzirirwo ari kunyatso simbisa iyo inoshanduka radius.
Kuwedzera kwekuda kwe kufamba zvishandiso zvinokurudzira zvitsva kufamba midziyo isingataridziki mavhiripu. Iwo matsva madhizaini anotaridzika senge scooters pane akajairwa mavhiripu.
Kubva paKushanda kusvika paMunhu
Ivo izvozvi zvakanyatsogadziriswa uye vashandisi vanogona kuwana kana gadzirisa imwe kuti ienderane nezvavanoda chaizvo zvakare nezvimwe zvese zvinodiwa kuti vagadzire chigaro chavo. Iko kune chaiko shanduko kubva mukushanda kuenda kune wega.
Technology yafambira mberi kusvika kupi wiricheya vashandisi vanogona kukwira nekudzika masitepisi vasina kubatsirwa. Chimwe chakadai mudziyo ndeye remara simudza inova chaizvo inotsvedza uye yekupeta chikuva uye ivo vanowanzo kuuya ne otomatiki kana semiautomatic maficha.
Ivo vari kuve vanozivikanwa zvakanyanya muzvivakwa zvitsva, pamasisitimendi ekufambisa yeruzhinji uye zvakare vari vega kufamba motokari.
Kusimudza sachigaro kunogona kuve chinhu chinobatsira kwazvo muzvivakwa, kunyanya pane zviripo remara kana kuti vagari vakura. mavhiripu zvino zvave kugadzirika zvakanyanya uye pasina mubvunzo munguva pfupi iri kutevera, pachava nezvigaro zvinogona kukwira nekudzika masitepisi zviri nyore.